Elight ipl rf iinwele nokususwa imigca enqamlezeneyo rejuvenation ubuhle umatshini njengoko-230+-Iinwele nokususwa umatshini-Hunan Astiland Zonyango Aesthetics Iteknoloji Co., Ltd.
Amandla e-rf engafakwanga lulongezo olutsha ngokhetho olukhethiweyo lobuso. Ngokuqala kwe-cryogenics kunokwenzeka ukuhambisa amandla e-rf kwi-dermis enzulu kunye ne-sub-dermal layers kolusu, ngelixa ukhusela i-epidermis. Ukufudumeza kule ndawo, ngaphandle kokonakalisa ulusu olungaphandle lwesikhumba, kubangela utshintsho kwimicroscopic kwizicubu nakwindlela yokwenziwa kwe-collagen, ngokuvuselela kwakhona i-collagen emva kweenyanga ezidlulayo.
Ukukhanya okukhanya kudibanisa iiteknoloji ezintathu eziphambili: Ukuqubuka rhoqo kunomathotholo + kwipl + ukupholisa ukuqhagamshela ulusu. Xa bobathathu behlangene kunyango olunye, amava amangalisayo onyango kunye nesiphumo sinokulindeleka. Amandla erediyo ephindaphindiweyo anokufikelela kububanzi kunye nobunzulu besikhumba kwaye atshise izicubu, ngenxa yoko, amandla asezantsi afakwa ngexesha lonyango lwe-ipl. Ukuziva ungakhululeki ngexesha lonyango lwe-ipl luya kuncitshiswa kakhulu kwaye kunokubakho isiphumo esingcono. Ukongeza, inkqubo yokupholisa ebandakanyeka ekukhanyisweni kwe-e inokuthomalalisa imvakalelo yokungakhululeki. Ukufunxwa kwamandla erediyo akuchaphazeli i-melanin. Ke, unyango lwe-e-ukukhanya lunokufumana isiphumo esihle kwizinwele ezithambileyo okanye ezinqabileyo ukwenzela ukunciphisa umngcipheko obangelwa kunyango lwendabuko lwendabuko.
Ukuvuselela ulusu, i-pigmentation, i-acne, i-vein ebomvu, i-rosacea, iimpawu zokuzalwa
Ukucuthwa okungapheliyo kweenwele
Ukususa imisonto Ukuqinisa ulusu
1.Idibaniswe ngokufanelekileyo i-RF / IPL / E-teknoloji yokukhanya.
Iisuti zolusu olunombala omnyama kunye neenwele ezikhanyayo.
Isibane se-xenon sase-Best esetyenzisiweyo, isiqinisekiso I-200,000 shots
3.Isafire yekristale yesandla Qinisekisa ukukhutshwa kwamandla aphakamileyo kunye -4 ℃ nokuphola konxibelelwano
4.Icebo lokucoca ulifaka ngesandla uyilo, imisebenzi emininzi
5.Inkqubo yokuphola okumangalisayo qinisekisa ukusebenza ixesha elide kunye namava angcono onyango
6.Umdibaniso womdibaniso womsebenzi, ukutshintshwa ngokulula
7. Inkqubo yenkqubo yolawulo elula yokusebenzisa:
Iilwimi ze7 ukhetho
Imowudi ezenzekelayo Ukusetwa kombala wolusu, umbala weenwele, ukuxinana kweenwele
Ukuhamba kwamanzi kunye nobushushu bamanzi ukukhangela auto kunye nesilumkiso, hlukana nokujonga inqanaba lamanzi
8.Isithuba sobungakanani bendawo: 15mm * 50mm, 8mm * 40mm
Uyilo olwenziwayo, olusemgangathweni ophezulu olusetyenziswayo
I-1pc i-E-light probe, 1pc RF probe
Icebo lokucoca i-Wavelength
I-530/690 ~ 1200nm (Inokukhetha)
I-3pc bipolar RF (enkulu, ephakathi, encinci)
12mm * 30mm okanye 15mm * 50mm
I-1 ~ 4s
Umoya + wamanzi + semiconductor
8 ″ Isibuko sokuchukumisa imibala yokwenyani
I-100 / 110V 60Hz okanye i-230-260V 50Hz
60cm (W) * 50cm (L) * 40cm (H)